ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားတဲ့ မင်္ဂလာဦးဧည့်ခန်းလေးကို ပရိသတ်ကြီးအား ပြသလာတဲ့ နေတိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် – Shwe Likes
ကိုယ်တိုင်ဖ န်တီးထားတဲ့ သူ့ရဲ့နေချင်စရာေ ကာင်းတဲ့ အိမ်ရဲ့ဧည့် ခန်းလေးကို ပရိသတ်ကြီးအား ပြသလာတဲ့ နေတိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်
အကယ်ဒမီ မင်းသားေ ချာ နေတိုး ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို အခိုင်အမာယူ ထားနိုင်သူပဲဖြစ် ပါတယ်နော်. နေတိုးက ကြော်ငြာမှာရော ရုပ်ရှင်ဇာတ်လ မ်းကားတွေ မှာလည်း သရုပ်ဆောင်ပိုင်နိုင် လွန်း တာကြောင့် လူကြီးရော လူငယ်ပါအသည်းစွဲ ချစ်နေရတဲ့ မင်းသားတ စ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသားချော နေတိုး ကတော့ အနေအထိုင် သိုသိ ပ်သူပီပီ ချစ်သူရှိနေတာကို သိပေမဲ့ လက်ထပ်ဖို့ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီ လားဆိုတာ ကိုလည်း ပရိသတ်ကိုအသိ မပေးဘဲ နေထိုင်သူလ ည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာလေး ကိုတော့ နိုင်ငံရေးအေြ ခနေတွေကြောင့် အိမ်မှာပဲကျင်း ပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ အနုပညာအ သိုင်းအဝိုင်းက ချစ်ခင်ရတဲ့သူေ တွလည်းတက်ရော က်ခဲ့ကြပါတယ်။
လူမှုကွန်ရက် မှာလည်း သူတို့ မင်္ဂလာပုံ ရိပ်လေးတွေ ပြန့်နှံ့သွားပြီး ပရိသတ်ေ တွအားကျခဲ့ ရတာပါ။တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံလေး ကိုသာ ဝတ်ြ ပီး ရိုးရှင်းစွာ မင်္ဂလာပွဲလေးပြု လုပ်ခဲ့တာပါ။
ပုံမှန်အချိန်မှာဆို ပိုစည်ကားတဲ့မင်္ဂလာ ပွဲလေးဖြစ်မှာေ သချာပေမယ့် ခုကတော့ အကျဉ်းချုံးသာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ နေတိုးကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း နေတိုးြ ပပေးတဲ့ အိမ်လေးကို ကြည့်ပြီးလည်း အရင်လို အားပေးကြပါအုံးနော်.. Source: Nay Toe
ကိုယ္တိုင္ဖ န္တီးထားတဲ့ သူ႔ရဲ့ေနခ်င္စရာေ ကာင္းတဲ့ အိမ္ရဲ့ဧည့္ ခန္းေလးကို ပရိသတ္ႀကီးအား ျပသလာတဲ့ ေနတိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင္
အကယ္ဒမီ မင္းသားေ ခ်ာ ေနတိုး ကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ့ အခ်စ္ေတြကို အခိုင္အမာယူ ထားနိုင္သူပဲျဖစ္ ပါတယ္ေနာ္. ေနတိုးက ေၾကာ္ျငာမွာေရာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လ မ္းကားေတြ မွာလည္း သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္နိုင္ လြန္း တာေၾကာင့္ လူႀကီးေရာ လူငယ္ပါအသည္းစြဲ ခ်စ္ေနရတဲ့ မင္းသားတ စ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
မင္းသားေခ်ာ ေနတိုး ကေတာ့ အေနအထိုင္ သိုသိ ပ္သူပီပီ ခ်စ္သူရွိေနတာကို သိေပမဲ့ လက္ထပ္ဖို႔ အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီ လားဆိုတာ ကိုလည္း ပရိသတ္ကိုအသိ မေပးဘဲ ေနထိုင္သူလ ည္း ျဖစ္ပါတယ္။
မဂၤလာေလး ကိုေတာ့ နိုင္ငံေရးေၾအ ခေနေတြေၾကာင့္ အိမ္မွာပဲက်င္း ပျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ အႏုပညာအ သိုင္းအဝိုင္းက ခ်စ္ခင္ရတဲ့သူေ တြလည္းတက္ေရာ က္ခဲ့ၾကပါတယ္။
လူမႈကြန္ရက္ မွာလည္း သူတို႔ မဂၤလာပုံ ရိပ္ေလးေတြ ျပန႔္ႏွံ့သြားၿပီး ပရိသတ္ေ တြအားက်ခဲ့ ရတာပါ။တိုင္းရင္းသားဝတ္စုံေလး ကိုသာ ဝတ္ျ ပီး ရိုးရွင္းစြာ မဂၤလာပြဲေလးျပဳ လုပ္ခဲ့တာပါ။
ပုံမွန္အခ်ိန္မွာဆို ပိုစည္ကားတဲ့မဂၤလာ ပြဲေလးျဖစ္မွာေ သခ်ာေပမယ့္ ခုကေတာ့ အက်ဥ္းခ်ဳံးသာျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ ေနတိုးကို ခ်စ္ၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေနတိုးျ ပေပးတဲ့ အိမ္ေလးကို ၾကည့္ၿပီးလည္း အရင္လို အားေပးၾကပါအုံးေနာ္.. Source: Nay Toe
ချစ်စဖွယ် အဖြူရောင် အမိုက်စားဖက်ရှင်လေး နဲ့ စတိုင်လ် ကျကျ မိမိုက်လှပနေတဲ့ မေ